Odoo: Otu Open Source Enterprise Web Application Suite | Site na Linux
Odoo: Otu Open Source Enterprise Web Application Suite
Linux Post Wụnye | | Aplicaciones, Noticias
Na ubi nke Free Software na Open Source, anyị na-ahụkarị ọtụtụ dị iche iche ihe ngwọta ngwanrọ, ịrụ ọ bụghị naanị otu mana ọtụtụ ọrụ. Mana, n'ozuzu, ndị a lekwasịrị anya n'iji ndị ọkachamara na teknụzụ (Sysadmin, DevOps, Ndị Mmepe, n'etiti ndị ọzọ) na ndị na-abụghị ndị nchịkwa, arụmọrụ na / ma ọ bụ njikwa. Otú ọ dị, Odoo ọ bụ otu n'ime ndị oké ike ngwọta dị.
Odoo bu uzo eji eme ihe eji emepe ahia, nke amara nke oma nke ndi mmadu na ndi mmadu na-achikota ha n'ime uwa nile.
N'agbanyeghị, Odoo bu ihe omuma ihe omuma, anyị ekwughị ọtụtụ okwu banyere ya, ebe ọ bụ otu n'ime oge ole na ole ahụ, akwụkwọ a kpọrọ: ODOO: OpenSource ERP nke n’enye ihe aga-ekwu!, site na ntakịrị ihe karịrị afọ 4 gara aga, mgbe Odoo M na-aga maka 8.0 mbipute, na ebe anyi kowara ya dika:
"Odoo bu uzo eji emeghe ihe omuma ahia nke bu ihe a ma ama dika OpenERP (maka acronym ya n'asusu Bekee, Enterprise Resource Planning), ngbanwe aha bu n'ihi na ebe o bu 8.0 Odoo meputara ma gabiga ibu usoro ERP ebe ọ bụ na agbakwunyela ọrụ na-atọ ụtọ ma bara uru nke na-arụ ọrụ dị ka ngwa ma ọ bụ blọọgụ, ya bụ, na-enweghị mkpa ka ERP na-achịkwa ya (agbanyeghị ọ na-aga n'ihu ịhapụ ndị ọrụ ya ka ha gaa n'ihu na-eme ya n'ụzọ ahụ)".
1 Odoo: Ngwaọrụ Websaịtị Suite
1.1 Ihe omuma banyere Odoo
1.2 Njirimara ugbu a: Odoo 13
1.3 Kwuru na Odoo
Odoo: Ngwaọrụ Websaịtị Suite
Ihe omuma banyere Odoo
Ọ bụ ERP Software, ya bụ, ọ bụ onye nhazi ihe nchịkwa nchịkwa maka ụdị nzukọ ọ bụla. Ihe kpatara ya, iji ya, ị nwere ike ijikwa mmepụta, lọjistik, nkesa, ahịa, ngwa ahịa, mbupu, ịre ahịa, akụrụngwa mmadụ, akwụkwọ ọnụahịa yana ọbụlagodi nzuko, n'etiti ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. . Maka nke a, a na-ahụ Odoo dịka Sistem Njikwa zuru ezu.
Odoo nwere mmepe modular ma nwee ọtụtụ ngwa ngwa n'ụzọ agbakwunyere na-ekpuchi ọtụtụ mkpa nke òtù. Na mgbakwunye, o nwere ọtụtụ puku ngwa na ụlọ ahịa ya n'ịntanetị.
Avoid na-ezere mkpa ị ga-achọ ihu n'etiti sọftụwia dị iche iche, ebe ngwa ngwa gị nwere ike ijikọ ibe gị nke ọma, na-enye gị ohere ịmegharị usoro dị mkpa ma ọ bụ dị mkpa n'ime nzukọ ọ bụla.
Njirimara ugbu a: Odoo 13
N'etiti njirimara ndị a ma ama, nke kachasị elekwasị anya na ọ dị mkpa iji gbanwee ngwa ahụ na gburugburu ụwa ma bulie ego karịa site n'ụdị ego ọhụrụ nke ngwa ahụ n'onwe ya, enwere ike ịkpọ njirimara ndị a:
Mbugharị imeghe isi nke ngwa ma ọ bụ modulu nke njikwa agụmakwụkwọ, agụmakwụkwọ na asambodo.
Okike nke ngwa ohuru ma obu modul ohuru, maka ugwo, nke anakpo Field Service Management (FSM), iji hazie, kenye ndi oru, jikwaa ma kwado ndi oru ubi.
Imelite nke Payroll Management ngwa maka njikwa mma nke ọrụ, dị ka, nchịkwa nke ụgwọ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ, ya bụ, iji mezuo ọrụ ndị ọrụ dị ka: ịkwụ ụgwọ, Social Security na ọrụ ụtụ isi. Modul ahụ bụ Open Source, mana na mbipute ya nke Enterprise, ọ na-abịa na mgbakwunye ndị na-eme ka ọrụ ya kawanye mma, na mba ọ bụla, ebe ọ na-eweta mmelite na ọnọdụ nke ọnọdụ.
Agbakwunyere ngwa Ntaneti nke Ihe (IoT) maka njikwa ngwakọ, iji jikwaa ngwa ahịa ngwa ngwa nke ọma.
Ejikọtara ngwa OCR iji kwado nyocha nke ndekọ (akwụkwọ ọnụahịa, dịka ọmụmaatụ) ma weghachite data gị na akpaghị aka.
N'ikpeazụ, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, ọ na-etinye ngwa mmezi nke na-enye ohere nlekota igwe na ngwaọrụ ejikọrọ, ngwa nchọta nke ụgbọ mmiri nke na-enye ohere ịdebe ọtụtụ ụgbọ ala, ngwa ụlọ akụ ka ndị ọrụ wee nwee ike ịrịọ mgbazinye ego site na ngwa ahụ, na ọrụ ọhụụ maka ijikọ Odoo na weebụsaịtị ndị mmadụ nwere ikike ị nweta.
Na ịmara ozi ọma ọ nwere ike itinye, nke ọhụrụ Odi obodo nke Odoo 14.0, nke a na-atụ anya ịmalite na October 2020, ị nwere ike ịnweta ihe ndị a njikọ.
Kwuru na Odoo
Dịka anyị nwere ike ịghọta, Odoo biara na ugwo ugwo (Enterprise), ma awade ekwe omume ibudata usoro zuru ezu si Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Odoo, na uru nke inweta koodu isi, nke na-enye ohere ịmepụta modulu ọhụrụ iji gbasaa ọrụ ma ọ bụ mepụta ndị ọhụrụ. Nke pụtara na ọ ga-edebe akụkụ kachasị mkpa nke ya, n'okpuru LGPL (GNU pere mpe nke ọha na eze), M na-ekwu, dị ka Meghee Isi mmalite.
Gịnị na-ekwe nkwa nnwere onwe nke ndị ọrụ ịkekọrịta ma gbanwee onwe ya, n'ime ya ụdị obodo (Odoo Community version), iji hụ na Sọftụwia na-akwụ ụgwọ n'efu ma na-emeghe, maka onye ọrụ ọ bụla ma ọ bụ nzukọ ọ bụla.
N'ikpeazụ, Odoo ha na-eji nwayọọ nwayọọ na-etinye ngwa ọhụrụ, iji nweta ọkwa dị elu nke arụmọrụ na mkpuchi na njikwa nke nzukọ ọ bụla. N'ụzọ dị otú a, na ọ na-anọgide na a ngwọta zuru ụwa ọnụ nke oge a, na-arịwanye elu ngwa ngwa, kensinammuo na mfe iji. Na ịmụtakwu banyere ya, ịnwere ike ịnweta njikọ ndị a: Obodo Odoo, GitHub, OpenERP Spain y Wikipedia.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Odoo», nke bu ihe puru iche ụlọ ọrụ ngwa ngwa weebụ de «Código Abierto» nnọọ uru maka jikwaa dị iche iche ma dị mkpa ọrụ azụmahịa n'ime nzukọ ọ bụla, nwere nnukwu mmasị na ịba uru, maka mmadụ niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Odoo: Otu Open Source Enterprise Web Application Suite
Anyị nwere ya na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ ruo afọ isii, gbagburu ya site na ebe nchekwa, ma eziokwu bụ na anyị nwere obi ụtọ na mmemme a. N'etiti mbipute n'efu na nke akwụ ụgwọ enwere obere ihe dị iche, ọkachasị nkwado, mana maka ụlọ ọrụ ọ bara uru iburu n'uche. Ọ pụtaghị na a naghị akwado ụdị nnwere onwe ahụ, n'ụzọ ọzọ, ịnwere ike ịkwado mmezi ya na onye ọ bụla, anyị nwere nhọrọ a. Ihe kacha ju anyị anya bụ ike na imeghari nke azịza ya, ihe ihere na nnukwu ụlọ ọrụ anaghị etinye ya na akaụntụ ahụ, mmemme ahụ nwere ikike iji mee ka onye na-akwụ ụgwọ ego na-achọsi ike. Maka ụgwọ nke mmejuputa ya, ịwụnye ya na ịmalite ya n'onwe gị dabara adaba maka ndị nwere oge karịa m, ọ bụ akụkụ nke azịza azụmahịa ọ bụla, ebe a ị kwụrụ ụgwọ maka mmezi (ọ bụrụ na ị naghị eme ya n'onwe gị) ma ọ bụrụ na ịchọrọ mgbanwe ọ bụla / Nhazi nke a ghaputara, kwesiri inye ya onye ozo.
Zaghachi Gregorio Ros
Ana m agbakwunye na okwu m gara aga: Site na mwepụ nke COVID a, otu akụkụ nke na-etinyeghị n'uche na-abịa na ìhè, Odoo arụnyere dị ka sava WEB, anyị nwere ajụjụ ya na sava a gbazitere Nke a pụtara na enwere m ike ịnweta ebe ọ bụla maka ịrụ ọrụ telefon, ma ọ bụ site n'ụlọ, site na ekwentị, site na ebe m nwere ịntanetị, ha niile na-enweghị mkpa mgbakwunye. Enwere ike itinye ya na sava nke gị, o doro anya na ọ ga-abụ nhọrọ maka ụlọ ọrụ na-ajụ ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ, mana maka ụmụaka, dị ka nke m si dị, ọ bara uru ịgbazite sava WEB, ọ na-efu nkịta anọ kwa afọ na enweghị ịzụta ma ọ bụ jigide enweghị ndị otu mpaghara.
Linux Post Wụnye dijo
Daalụ, Gregorio! Okwu gị na-aga nke ọma.
Zaghachi ka Linux Post Wụnye
Mozilla ewepụtala ụdị ọhụrụ nke Firefox 74 na ndị a bụ mgbanwe ya kachasị mkpa
AUMBI: Mepee ngwa ngwa iji mepụta USB bootable na Windows